Budata TP-Link Tether APK maka Android
Budata TP-Link Tether
Free Budata maka Android (32.00 MB)
Budata TP-Link Tether,
Iji TP-Link Tether ngwa, ị nwere ike ijikwa TP-Link modem, rawụta na Rande Extender ngwaọrụ gị gam akporo ngwaọrụ.
Ngwa TP-Link Tether, nke TP-Link mepụtara maka ngwaahịa nke ya, bu nobi ijikwa na ikwado ịnweta ngwaọrụ gị dị ka ndị na-anya ikuku ikuku, modem na Range Extenders. Nime ngwa TP-Link Tether, ebe ị nwere ike ịtọ ngwa ngwa na ngwa ngwa ngwaọrụ gị, ị nwere ike ịnweta ntọala dị iche iche nke ngwaọrụ ị rụnyere.
Ị nwekwara ike nyochaa ngwaọrụ ejikọrọ na netwọk gị nụzọ zuru ezu na ngwa TP-Link Tether, ebe ị nwere ike ịnweta nkọwa dị ka nbudata na bulite ọsọ, aha Wi-Fi na paswọọdụ site na ijikọ na interface nke modem ikuku gị. Ị nwere ike budata ngwa TP-Link Tether nefu, ebe ị nwekwara ike iji nhọrọ nkekọrịta Wi-Fi.
Ime ntọala nke ngwaọrụ VDSL-ADSL
Na-egbochi ndị ọrụ enweghị ikike
Nweta njikwa ikike
njikwa nne na nna
Ntọala ndokwa ngwaọrụ
Njikwa ọkụ ọkụ LED
TP-Link Tether Ụdịdị
Nha faịlụ: 32.00 MB
Mmepụta: TP-LINK Technologies Co., Ltd.